एनसेलको युवा लक्षित ‘सही यो ! पावर सिम’ अफर
नेपाली युवाले अब उनीहरूकै लागि विषेश रूपमा तयार गरिएको एनसेलको नयाँ सिम योजनाबाट फाइदा लिन सक्ने भएका छन् । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले विभिन्न सेवाहरूको बन्डलिङसहित नयाँ स्टार्टर प्याक ‘सही यो ! पावर सिम’ ल्याएको घोषणा गरेको छ । यो सिममार्फत् ग्राहकले अझ सुलभ दरमा सेवाहरू लिन सक्नेछन् ।